Valentine’s Day က (၁)နှစ်မှာ (၂)ရက် ရှိတယ်ဆိုတာ သိပါသလား? | Mandalay Directory | Myanmar Business Directory | Advertise in Mandalay | Mandalay Yellow Pages
Valentine’s Day က (၁)နှစ်မှာ (၂)ရက် ရှိတယ်ဆိုတာ သိပါသလား?
ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၄)ရက်က ချစ်သူများနေ့ (Valentine’s Day) ဆိုတာကိုတော့ ခေတ်လူငယ်၊ လူလတ်ပိုင်းတွေ အကုန်လုံး သိပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် မကြာသေးတဲ့ အချိန်ကာလတစ်ခုမှာပဲ Valentine’s Day ဆိုတာ (၂)ရက် ဆိုပြီး အာရှက လူငယ်တော်တော်များများ လက်ခံလာကြပါတယ်။
ဒီ(၂)ရက်အကြောင်း မပြောခင် ပထမဆုံးအနေနဲ့ Valentine’s Day ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာသလဲ ဆိုတာကိုလည်း ဗဟုသုတရဖွယ် ပြောပြပေးလိုက်ချင်ပါတယ်။ Valentine’s Day သမိုင်းကြောင်းအစဟာ ရောမမြို့ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုကနေ ဖြစ်တည်လာတာပါတဲ့။
ရောမပြည်ရဲ့ ဘုရင်တစ်ပါး လက်ထက်မှာ စစ်တိုက်ထွက်ကြတဲ့ စစ်သည်တော်တွေဟာ ချစ်သူရည်းစားနဲ့ ဇနီးမယားတွေကို တမ်းတအမှတ်ရမူများကြောင့် စစ်ပွဲတိုင်းအမြဲ ရှုံးနှိမ့်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို ဘုရင်ကြီးသိတဲ့အခါ ရောမမြို့မှာ ချစ်သူရည်းစား ထားခြင်းကို ပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အစဉ်အလာအရ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း အမှုကို ပြုလုပ်ပေးကြတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးတွေကိုလည်း ဘယ်စုံတွဲကိုမှ ထိမ်းမြားခြင်း လုံးဝမပြုလုပ်ပေးရ ဆိုပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန် တားမြစ် အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တစ်နေ့မှာတော့ နှလုံးသားရဲရင့်တဲ့ ချစ်သူနှစ်ဦးဟာ သူတို့ရဲ့အချစ်ကို နေ့တစ်နေ့အတွက် မရည်စူးပါ။ ချစ်တတ်သူတွေ အမြဲရှင်သန်ဖို့ ဘုန်းတော်ကြီး စိန့်ဗယ်လင်တိုင်း (St. Valentine) ကို လက်ထပ်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
ဘုန်းတော်ကြီး စိန့်ဗယ်လင်တိုင်းဟာ ချစ်သူတွေရဲ့ သဘော သဘာဝ၊ ချစ်ခြင်းနိယာမကို နားလည် စာနာတတ်သူ ဖြစ်တာမို့ မိမိအသက်ကို ပဓာနမထားဘဲ အဲ့ဒီ စုံတွဲတစ်တွဲကို လက်ထပ်ပေးလိုက်ပါတယ်တဲ့။ ဒီအကြောင်းကို ဘုရင်သိတဲ့အခါ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၄)ရက်မှာ ဘုန်းတော်ကြီးကို အဆုံးစီရင်လိုက်ပါတယ်။
ဒီလိုမျိုး အမှန်တစ်ကယ် ချစ်ရတဲ့ ချစ်သူစုံတွဲတွေအတွက် အသက်ပေးသွားခဲ့တဲ့ ဘုန်းတော်ကြီး စိန့်ဗယ်လင်တိုင်းကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ Valentine's Day (သို့မဟုတ်) ချစ်သူများနေ့ဆိုပြီး ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
(၂၁)ရာစုကို ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ ဖေဖော်ဝါရီ (၁၄)ရက်ကို Valentine’s Day လို့ ကလေးလူကြီးမကျန် သိလာကြပါပြီ။ ဒါပေမယ့် တော်တော်များများ မသိသေးတဲ့ ချစ်သူများနေ့ နောက်တစ်ရက်ကတော့ White Day လို့ ခေါ်ပါတယ်နော်။
ဒီ White Day ကိုတော့ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းရဲ့ မတ်လ(၁၄)ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်ကြတာ ဖြစ်ပြီး မကြာသေးမှီကမှ Asia ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကနေ စတင် ခေတ်စားလာတာပါ။ လူတွေအကုန်သိကြတဲ့ Valentine’s Day လိုပဲ ကိုယ်ချစ်ခင်ရတဲ့ သူတွေကို ချောကလက်နဲ့ သကြားလုံးတွေ လက်ဆောင်ပေးလို့ ရတဲ့ နေ့လေးဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၄)ရက်နေ့မှာ ကောင်မလေးတွေက ကိုယ့်ရဲ့ ချစ်သူကောင်လေး (သို့မဟုတ်) တစ်ဖက်သတ် ချစ်ရတဲ့ ကောင်လေးတွေကို ချောကလက်တွေ လက်ဆောင်ပေးပြီး မတ်လ(၁၄)ရက်နေ့ကတော့ ကောင်လေးတွေက ကောင်မလေးတွေကို လက်ဆောင်ပြန်ပေးပြီး တရားဝင် ဖွင့်ပြောလို့ ရတဲ့ နေ့တစ်နေ့လည်း ဖြစ်ပါတယ်နော်။
ကဲ၊ ဖေဖော်ဝါရီ (၁၄)ရက်နေ့ကိုရော မတ်လ (၁၄)ရက်နေ့ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကိုပါ သိပြီးသွားပြီဆိုတော့ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့ သူတွေကို လက်ဆောင်ပေးရင်း တစ်ဖက်သတ် ချစ်ရသူတွေကို လက်ဆောင်ပေးဖို့ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း လက်တို့လိုက်ကြဦးနော်။
Mandalay Trend Read 113 times